Keke Kushongedza Basics: Smooth Yekupedzisira Coat yeButtercream - Sugar Geek Show - Blog
Keke Kushongedza Basics: Smooth Yekupedzisira Coat yeButtercream
Maitiro ekuwana makona akapinza pane ako buttercream
Saka chii chinouya mushure mekubheka kwese, kurwadzisa, kuchekerera, kuzadza uye kuputira? Iyo yekupedzisira kubwinya jasi re buttercream! Nhasi tichakutora iwe kuburikidza nematanho ekuti ungaite sei yakapfava yekupedzisira jasi re buttercream kunyangwe iwe uchironga kufarira keke rako kana kwete. Kana iwe uchinge warasikirwa nhanho dzese dzakapfuura dzinoendesa kune ino, ita shuwa yekushanyira mamwe ese Keke Kushongedza Basics blog zvinyorwa kuti ubatwe pamusoro pekuenda kusvika pano!
Crumb-yakavharwa uye yakanyorova keke
Ita kuti makeke ako akafukidzwa keke chilled akasimba uye akagadzirira kuenda.
Wedzera huwandu hwerupo rwe buttercream kumusoro kwekeke rako. Pano Liz ari kumushandisa Nyore Buttercream Recipe .
Tanga kushandisa yako offset spatula kuti ubudise iyo buttercream pamusoro. Edza kuchengeta yako spatula mwero uye ramba uchishanda iyo kusvikira yako yepamusoro zvakare yakaenzana uye yakatetepa sezvinobvira.
Tanga kuwedzera imwe yerupo yakawanda ye buttercream kumativi ekeke rako. Usatombo kunetseka, isu tichave tichitora zvizhinji zveizvi nekukurumidza mukugadzirisa nzira.
Shandisa bhenji rinotsvaira kana Innovative Sugarworks yakasimba senge Liz ari pano kutanga kutsvedza mativi e buttercream yako. Bata chako chinokwenya kuitira kuti chinyorwe chakatarisa mukati mako uye kwete pakatwasuka 90 degree kona kubva kukeke.
chitoro sitirobheri mufiriji kana kwete
Tsvaira yako buttercream inotsvedzerera paunenge uchitenderedza yako turntable uchiita chokwadi chekuchengeta yako yakatsetseka level uye yakatwasuka. Gadzira yakawandisa buttercream mumudziyo sezvaunoenda.
Pano iwe unogona kuona iyo chaiyo angle iyo inokwenenzverwa inofanira kuve iri kubva kune yako maonero ekuona. Ramba uchikwenya kusvika iwe wasvika pekeke rako bhodhi pasi uye mativi anotaridzika akanaka! Kana uine maburi mashoma pano nepapo panguva ino zvakanaka nekuti tichazvigadzirisa gare gare.
maitiro ekugadzira ganache isina heavy cream
Mativi ako anofanira kutarisa chimwe chinhu seichi.
Tora yako yakachenesa spatula uye wedzera marara ako epamusoro mukati. Ramba uchikwenya ruomba rwakawandisa kubva kune yako spatula kuti uwane mhedzisiro iri nani.
Hezvino izvo zvaunofanirwa kuve nazvo panguva ino. Zvino isu ticha chill izvi mufiriji kudzamara yakasimba zvakare.
Kana keke rako rangove rakanaka uye rakasimba, wedzera rimwe rekupedzisira rakapetwa jasi re buttercream kune yako yepamusoro uye mativi kuti uzadze chero maburi kana maburi aungave uchiri nawo.
Ramba uchikwenya uye uchiwedzera kusvikira hwatsetseka sezvinobvira!
NGANO: Izvo hazvina basa kuti yako buttercream inoratidzika sei kana iwe uri kuisa fondant pakeke rako.
CHOKWADI: Iyo inotsetseka yako buttercream iri, iyo inotonhorera uye zvirinani yako fondant inotaridzika. Tora nguva yekugadzira yakanaka base yako fondant nekuti icharatidza kusakwana kukuru.
Uchishandisa yakachena offset spatula yako zvakare, inotsvedza mumakona epamusoro e buttercream. Iyi yekupedzisira jasi maitiro anogona kutora nguva yakati wandei kunyanya kana iwe uri mutsva kwairi. Iva nemoyo murefu uye dzidzira maitiro akanaka uye iyo yekumhanyisa inouya gare gare!
Mushure mezvose iwe unofanirwa kuve nechinhu chakadai. Keke rakagadzirira kuvharwa nefondant. Kana usiri kufukidza keke rako mune fondant, iwe uchazoda kutora kunyange yakawedzera nguva kuti uve nechokwadi chekuti haina mhosho.
maitiro ekugadzira nyanzvi yekutarisa keke
Zvino zvainge zvoda kutyisa sezvawaifunga here? Unogona kuzviita! Kushivirira ndiyo kiyi chaiyo. Kana iwe uchinge uine chero mibvunzo iyo Sugar Geek Chikwata inogara iri pano kubatsira! Svondo rinouya isu tichafukidza imwe nzira yeiyo yekupedzisira jasi re buttercream inonzi Iyo Kumusoro Pasi Nzira. Iyi nzira inogona kuchengetedza mega nguva uye kushungurudzika uye kuburitsa mhedzisiro zvirinani asi haisi yemunhu wese saka kana iwe uchida kunamatira kune yakakosha nzira yatakaratidza nhasi, hapana chakaipa neizvozvo! Hapana kutonga pano vanhu.
Shannon ndiye muridzi we SweetArt Cake Kambani muLovell, Wyoming. Mugadziri weiyo YouTube chiteshi Iyo Inotapira Spot , Shannon akave akaiswa mumagazini akati wandei kusanganisira pabutiro re Keke Masters . Blog munyori uye mupiro kune Iyo Sugar Geek Show.
Webhusaiti Facebook Instagram
Kuenda pamusoro pezvakakosha? Tarisa uone izvi!
Keke Kushongedza Zvekutanga: Unofanirwa Kuva Nechishandiso Kuongorora
Keke Kushongedza Basics: isina mhepo Space Buttercream
Keke Kushongedza Basics: Kuenzanisa uye Kutambura
Keke Kushongedza Basics: Kuzadza uye Crumb Kuputira
Keke Kushongedza Zvekutanga: Kudzivirira Keke Blowout
Keke Kushongedza Basics: Iyo Yakatarisa Pasi Nzira
Keke Kushongedza Basics: Chakavanzika cheKeke Diki
Keke Kushongedza Basics: Kuvhara Keke muFondant
Keke Kushongedza Basics: Maitiro ekuwana Sharp Edges
Keke Kushongedza Kwekutanga: Nyore Dhiri Bharari
Keke Kushongedza Basics: Maitiro ePaneru
Keke Kushongedza Basics: Kuisira Keke
almond keke recipe nekeke musanganiswa
vanilla bundt keke mabikirwo kubva pakutanga
Kugadzira roll roll
classic chena keke mapepa kubva pakutanga
maitiro ekugadzira guruva redisco rinodyiwa